कलेजोबारे जान्नैपर्ने तथ्य « Onlinetvnepal.com
Published : 13 March, 2018 9:56 am
आमाले तरकारी बेचेर पढाएको छोरा जिल्लाकै पहिलो पाइलट बने , ठूला जहाज उडाउछन् , आमा दंग ! जानी राखौ
घरको आर्थिक अवस्था त्यति सहज थिएन । बुबा नेपाली सेनाको हवल्दारबाट निवृत्त भएर गाउँमै खेती
बिर्सेर पनि खेर नफाल्नुहोस अण्डा उसिनेको पानी छन् अचम्मका फाइदाहरु ! जानी राखौ
अण्डा हाम्रो स्वास्थका लागी आबश्यक खाने कुरा हो ।प्रोटिनले भरिपूर्ण अन्डा स्वादका लागी मात्र नभइ
बिहान खाली पेटमा दुई पोटी लसुन खानुहोस्, पाउनुहुनेछ यी चमत्कारिक फाइदा ! जानी राखौ
लसुन, जो हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुन्छ । तरकारीको स्वादर वास्ना बढाउनका लागि लसुन उपयोगी
ग्याष्ट्रिकले नराम्रोसँग सतायाे ? नआतिनुहोस्, घरमै बनाएको अाैषधिले सजिलै निको हुन्छ ! जानी राखौ
मानिसको सही आहार बिहार नभएर धेरैजसो रोगी भएका छन् । खान नपाएर भन्दा पनि खान
संसारमा यस्तो पनि बच्चा जस्को पेटमा ८ ओटा अंग जोडिएकाे छ !
बच्चाले परिवारमा खुसी ल्याउँछ । सबै बच्चा खास हुन्छन् । वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि अधिकांश दम्पतीको
राजिनामा मागेपछि सर्वेन्द्र खनालले दिए सांसदकै अगाडि वर्दी फुकाल्ने चेतावनी (भिडियो सहित)
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा प्रहरीले केही गर्न नसकेको भनेर सांसदहरूले आइजीपी
संसारमा यस्तो पनि बच्चा जस्को पेटमा ८ ओटा अंग
दी भ्वाइस अफ नेपालका यी हुन् चार फाइनलिस्ट :
राजिनामा मागेपछि सर्वेन्द्र खनालले दिए सांसदकै अगाडि वर्दी फुकाल्ने
आमाले तरकारी बेचेर पढाएको छोरा जिल्लाकै पहिलो पाइलट बने